EBC: ‘Tajaajilli Tigiriffaa piropogaandaa TPLF tamsaasuuf ta’uu hin danda’u’ - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsEBC: ‘Tajaajilli Tigiriffaa piropogaandaa TPLF tamsaasuuf ta’uu hin danda’u’
Hojii-gaggeessaan Korporeeshinii Biroodkaastiingii Itoophiyaa, EBC Dr. Nugusee Mitikkuu tajaajilli Tigiriiffaa piropogaandaan TPLF ittiin tamsa’u ta’uu hin danda’u jedhan.
(bbcafaanoromoo)—Hoji-gaggeessaan kun kana kan jedhan Korporeeshinichi erga jijjiiramni siyaasa biyyattii keessatti erga dhufee booda tajaajila TVn kun Tigiriffaan dhiyeessaa jirurra dhiibaan jira qeeqa jedhuuf deebii yeroo kennan ure.
Akka Dr. Nuguseen jedhanitti tajaajilli Tigiriffaa baroota darban caala amma bilisaadha.
Dhimmoota siyaasa naannoo Tigraay keessatti raawwataman akka hin gabaasne tooftaalee garaagaraan dhiibbaan irra gahaa akka jiru gaazexessitootni tajaajila Tigiriffaa ni komatu.
Akka fakkeenyaattis koonfiransii ummataa Sanbataafi Dilbata darbe magaala Maqaleettii qophaa’ee turerratti ibsa ejjennoo kaahame akka hin gabaafamne ta’uu, “heeraa biyyaafi federaalizimii baraaruu” mata duree jedhuun koonfiransii qophaa’ee tures akka hin gabaasne dhiibbaan taasifamuun ka’aniiru.
‘Walitti baquu aangoof jedhamee taasifamu TPLF gonkumaa hin fudhatu’
Gaffiiwwan kanaaf deebi kan kennan Dr. Nuguseen dhimmi yaa’ii uummataa sanbata darbee Afaan Amaaraanis Tigriffaanis gabaafamuu dubbatanii, ”hojmaata miidiyaa (editorila policy) wanni faallessuu hanga hin jirretti hin gabaasinaa wanti jedhamu, af-gaaffii hin gaggeessinaa kan jedhu hin jiru” jedhan.
Saganta ”heeraa biyyaafi federaalizimii baraaruu” jechuun Maqaleetti torban muraasa dura gaggeefamee ture ilaalchisee deebii kennaniin garuu heerr biyyaa maal ta’eetu baraarama, ABBUT baraaraayi, dhimmichi falmisiisaadha” jechuun ilaalcha dhuunfaa isaanii itti makaniiru.
”Akka miidiyaatti taatee sana ni gabaasna, haata’u malee ibsa ejjennoo baahan irratti wanni of eeggannoon ilaallu jiraa, jijiirama dhufe kana uummatni hedduun ni deeggaraa” jedhan.
”Editorila policy, haala qabatamaa biyyaa waliin wanna walfaallessu yoo ta’e, uummata walirratti kan kakaasu yoo ta’u fi wanna akka kanaarratti wanni of qusannu jira. Kunimmoo Tigraayiif qofa osoo hin taane Amaaraatti, Oromiyaattis, iddoo biroottis hojjeta.”
Dhimmoota uummata Tigraayiin ilaallatu hundu ni darbuu kan jedhan Dr. Nuguseen, tajaajilichi ”fedha gareef jecha fedha uummata Itoophiyaa hin gatuu” jedhan.
”Waggoota 27darbaniif heerrii ABBUT’ti hojiirra oolchemoo wanti heera jedhamu maataan isaa jira turee” jechuun ilaalcha dhuunfaa isaanii calaqqisaniiru.
Aanga’oonni TPLF MM Abiy waliin maal mari’atan?
Erga jijjiiramni siyaasaa biyya keessatti dhufeen booda taateewwan jajjaboo naannoo Tigraay keessatti raawwataman akka hin gabaafamne dhibbaa gochuu, dhiyeenya kanas dubbii himtuu mootummaa naannoo Tigraay waliin af-gaaffiin karoorfame akka hin tamsaan dhorkamuu garuu gaazexessitootni tajaajila Tigriffaa komataniiru.
Bilisummaan sabaa himaa kabajameera jedhamee wayita dubbatamaa jirutti, dhibbaan tajaajilli kun narra gahaa jira jedhu akkamiin ilaalama gaaffii jedhu yoo deebisan, ”bilisummaan miidiyaalee cunqurfamaa kan ture waggoota 27 darbaniif mootummaa ABBUT olaantummaa irraa qabu keessatti ture”jedhan.
”Miidiyaan akka fedhe kan taasifamaa ture waggoota darbanii amma midiyaan bilisa, yaada garaagaraa keessummessa jira” jedhan.
Tajaajilli Tigiriffaa miidiyaa ABBUT miti kan uummata Itoophiyaati. Uummatni Tigraay sagalee isaa ukkaamfame kan itti dhageessisuudha. Adaan, duudhaafi misoomnii uummata Tigraay kan itti dhagaahamu malee, tajaajila propogaandaan ABBUT ittiin tamsa’u ta’uu hin danda’uu” jedhan.
”Tajaajilli kun baroota kamuu caala amma dhiibbaarraa bilisa ta’ee hojjechaa jiraa. Yoo rokkoon isaan qunnamee jiraate na dubbisuuttu irra jira. Hanga ammaa komiin kun na bira hin dhufnee jedhan.